တစ်နေကုန် ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်မိတ်ကပ်ဖြစ်ဖို့အတွက် ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်အချက်များ -
တစ်နေကုန် ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်မိတ်ကပ်ဖြစ်ဖို့အတွက် ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်အချက်များ
Posted on March 8, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
‘မဖတ်ကြည့်ရင်တော့ သေချာပေါက် နောင်တရတော့မယ်ကွာ…’
တစ်နေကုန် နေပူထဲချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ ပြေးလွှားသွားလာနေရလို့ မိတ်ကပ်မမြဲသည်ဖြစ်စေ အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာ သာသာယာယာလေး ထိုင်နေရပေမဲ့ အဆီအရမ်းပြန်လို့ ဖြစ်စေ မိတ်ကပ်တွေအကွက်လိုက်ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာက ဒီလိုရာသီဥတု၊ အစားအသောက်ပြဿနာများတဲ့ နိုင်ငံမျိုးမှာအဖြစ်များမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းဆိုတော့လည်း မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ အဖြေရှာရမှာပေါ့ကွယ်။ ဒါကြောင့် နှင်းက တစ်နေကုန် မပျက်မကွက်ဘဲ လုံးဝလုံးဝ နေရာမရွေ့တဲ့မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်လေးဖြစ်အောင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေပြောပြမယ်ဆို အဇမ်းတွေများစိတ်ဆိုးသွားမလား ယောင်းတို့ရေ… စေ့ဆိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူး ရေးဆျာရှိတာတော့ရေးရမှာပဲ အယ်လဲ့ 😝😝
ဒါကတော့လေ တွေ့တိုင်းပြောတယ်၊ သတိရတိုင်းလည်းထည့်ပြောတယ် နောက်လည်း အခါအခွင့်သင့်သလိုကို ပြောနေရဦးမှာပဲ။ မိတ်ကပ်မြဲဖို့ဆိုတာ ပင်ကိုယ်အသားအရေကောင်းဖို့အရေးကြီးသလို အကယ်၍ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခု ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒါလေးကိုတတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ပေးဖို့အတွက် ဒီလိုအကူပစ္စည်းတွေက အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အောက်ခံကိုသုံးရင် (ဥပမာ ချွေးပေါက်ကျယ်တဲ့ယောင်းတွေက ချွေးပေါက်တွေကိုဖြည့်ပေးမယ့် Pore eraser တို့၊ အသားခြောက်တဲ့ယောင်းတွေကလည်း မိတ်ကပ်သားကို ညက်တဲ့အပြင် အသားအရေကိုပါ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးမယ့် Aqua Primer လေးသုံးပေးတာမျိုး) စသည်ဖြင့် သုံးပေးတဲ့အခါမှာ မိတ်ကပ်ကအရမ်းမမြဲရင်တောင် အရမ်းကြီးကွက်နေတာမျိုး ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။
(၂) မိတ်ကပ်အရည်ကို ပေါင်ဒါနဲ့အချောသတ်ပါ။
အသားခြောက်သည်ဖြစ်စေ၊ အဆီပြန်သည်ဖြစ်စေ မိတ်ကပ်အရည်ကို ဒီအတိုင်းပဲလိမ်းတဲ့အခါ ပြောင်ပြောင်ကြီးနဲ့ မိတ်ကပ်ကမညီမညာဖြစ်နေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ယောင်းက အဆီပြန်တတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ ပေါင်ဒါကို ရှောင်နိုင်လေကောင်းလေမို့ အရောင်မပါတဲ့ ပေါင်ဒါအမှုန့်ကို ဘရပ်ရ်ှခပ်ကြီးကြီးနဲ့ နည်းနည်းပဲယူပြီး မျက်နှာအနှံ့ခပ်ပါးပါးလေး ပုတ်လိုက်တာက အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ (အသားလည်းအရမ်းမခြောက်တော့ဘူးလေ။)
Related Article >>> Collagen က ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုနေလဲ?
ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ အဆီပြန်တဲ့လူက အဆီပါဝင်မှုနှုန်းများတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းကိုရွေးရင် အဆီပြင်ကြီးဖြစ်နေမှာဖြစ်သလို အသားခြောက်တဲ့လူကလည်း အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်ပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရင်တော့ မိတ်ကပ်ကခြောက်သွေ့အက်ကွဲနေမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းအရောင်ရွေးဖို့ အရေးကြီးသလို အမျိုးအစားကလည်း မှန်ကန်နေဖို့က မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်နော်။
(၄) မျက်နှာကို တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် ဆဲလ်အသေတွေဖယ်ရှားပေးပါ။
မျက်နှာမှာ ဆဲလ်အသေတွေများနေရင် မိတ်ကပ်လိမ်းရတာ အဆင်မပြေသလို အသားအရေမညီညာတဲ့နေရာတွေများနေတာမို့ မိတ်ကပ်ညီအောင်ညှိဖို့အတွက် အရမ်းကိုခက်ခဲပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ယောင်းယောင်းလေးတွေ တစ်ပတ်မှာတစ်ခါ ဆဲလ်အသေတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက် Exfoliate လုပ်ဖို့လုံးဝမမေ့ပါဘူးလို့ ကတိပေး။
Related Article >>> အသားဖြူဖို့ကနံပါတ် (၁) လား? နိုးးးး အသားအရေကောင်းဖို့က နံပါတ် (၁) ပါနော်…
(၅) ချွေးထွက်တတ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်ဆိုရင် ရေစိုခံ၊ ချွေးစိုခံတဲ့ မိတ်ကပ်ကိုသုံးပါ။
တချို့တွေရှိတယ် ငုတ်တုပ်ထိုင်နေရင်းကို အဆီမပြန်ဘဲ ချွေးတွေပြန်နေတာ။ အဲဒါမျိုးကျတော့ တော်ရုံ Matte အမျိုးအစားနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေတော့ဘူးလေ။ အဲဒီအခါကျရင်တော့ ရေစိုခံ၊ ချွေးစိုခံတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးသုံးမှ အဆင်ပြေမှာမို့ ရဲရဲသာသုံးပါလို့။ (မိတ်ကပ်တော့ သေချာပြန်ဖျက်ပေးနော်။ မဟုတ်ရင် ချွေးပေါက်ပိတ်ပြီး အဖုအထစ်တွေ ထလာလိမ့်မယ်။)
ကဲ ဘာခက်လို့တုန်း? ဒီအထဲမှာရော ခက်တဲ့အချက်တွေပါလားပြော? ဒါမဲ့လေ ယောင်းလေးတို့က အာ့လိုလွယ်လွယ်လေးတွေကိုပဲ လိုက်မလုပ်ချင်တာက ပြဿနာ။ တစ်နေကုန်လှချင်တယ်ဟုတ်? ဒါဆိုရင် ဒီလိုအချက်လေးတွေကိုလိုက်နာပြီး ကိုယ့်အသားအရေကိုလည်း ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ရမယ်နော်။ အာ့ဆိုရင် နောက်တစ်ပုဒ်မှ ထပ်တွေ့ကြမယ်လို့ ခုတော့တာ့တာ။
‘မဖတျကွညျ့ရငျတော့ သခြောပေါကျ နောငျတရတော့မယျကှာ…’
တဈနကေုနျ နပေူထဲခြှေးတဈလုံးလုံးနဲ့ ပွေးလှားသှားလာနရေလို့ မိတျကပျမမွဲသညျဖွဈစေ အဲယားကှနျးခနျးထဲမှာ သာသာယာယာလေး ထိုငျနရေပမေဲ့ အဆီအရမျးပွနျလို့ ဖွဈစေ မိတျကပျတှအေကှကျလိုကျဖွဈတတျတဲ့ ပွဿနာက ဒီလိုရာသီဥတု၊ အစားအသောကျပွဿနာမြားတဲ့ နိုငျငံမြိုးမှာအဖွဈမြားမယျထငျတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး ဖွဈသမြှအကွောငျးအကောငျးဆိုတော့လညျး မဖွဈဖွဈတဲ့နညျးနဲ့ အဖွရှောရမှာပေါ့ကှယျ။ ဒါကွောငျ့ နှငျးက တဈနကေုနျ မပကျြမကှကျဘဲ လုံးဝလုံးဝ နရောမရှတေဲ့မိတျကပျအပွငျအဆငျလေးဖွဈအောငျ ဆောငျရနျရှောငျရနျလေးတှပွေောပွမယျဆို အဇမျးတှမြေားစိတျဆိုးသှားမလား ယောငျးတို့ရေ… စဆေို့းလညျးမတတျနိုငျဘူး ရေးဆြာရှိတာတော့ရေးရမှာပဲ အယျလဲ့
ဒါကတော့လေ တှတေို့ငျးပွောတယျ၊ သတိရတိုငျးလညျးထညျ့ပွောတယျ နောကျလညျး အခါအခှငျ့သငျ့သလိုကို ပွောနရေဦးမှာပဲ။ မိတျကပျမွဲဖို့ဆိုတာ ပငျကိုယျအသားအရကေောငျးဖို့အရေးကွီးသလို အကယျ၍ ခြို့ယှငျးခကျြတဈခုခု ရှိနတေယျဆိုရငျလညျး အဲဒါလေးကိုတတျနိုငျသလောကျဖွညျ့ပေးဖို့အတှကျ ဒီလိုအကူပစ်စညျးတှကေ အရမျးကိုအရေးကွီးပါတယျ။ နောကျပွီး ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ အောကျခံကိုသုံးရငျ (ဥပမာ ခြှေးပေါကျကယျြတဲ့ယောငျးတှကေ ခြှေးပေါကျတှကေိုဖွညျ့ပေးမယျ့ Pore eraser တို့၊ အသားခွောကျတဲ့ယောငျးတှကေလညျး မိတျကပျသားကို ညကျတဲ့အပွငျ အသားအရကေိုပါ ရဓောတျဖွညျ့ပေးမယျ့ Aqua Primer လေးသုံးပေးတာမြိုး) စသညျဖွငျ့ သုံးပေးတဲ့အခါမှာ မိတျကပျကအရမျးမမွဲရငျတောငျ အရမျးကွီးကှကျနတောမြိုး ဖွဈတော့မှာမဟုတျပါဘူးနျော။
(၂) မိတျကပျအရညျကို ပေါငျဒါနဲ့အခြောသတျပါ။
အသားခွောကျသညျဖွဈစေ၊ အဆီပွနျသညျဖွဈစေ မိတျကပျအရညျကို ဒီအတိုငျးပဲလိမျးတဲ့အခါ ပွောငျပွောငျကွီးနဲ့ မိတျကပျကမညီမညာဖွဈနတောမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ အကယျ၍ယောငျးက အဆီပွနျတတျတဲ့လူဆိုရငျတော့ ပေါငျဒါကို ရှောငျနိုငျလကေောငျးလမေို့ အရောငျမပါတဲ့ ပေါငျဒါအမှုနျ့ကို ဘရပျရျှခပျကွီးကွီးနဲ့ နညျးနညျးပဲယူပွီး မကျြနှာအနှံ့ခပျပါးပါးလေး ပုတျလိုကျတာက အဆငျပွစေပေါလိမျ့မယျ။ (အသားလညျးအရမျးမခွောကျတော့ဘူးလေ။)
Related Article >>> Collagen က ခန်ဓာကိုယျကို ဘယျလိုအကြိုးပွုနလေဲ?
ဒါကတော့ရှငျးပါတယျ။ အဆီပွနျတဲ့လူက အဆီပါဝငျမှုနှုနျးမြားတဲ့ ဖောငျဒေးရှငျးကိုရှေးရငျ အဆီပွငျကွီးဖွဈနမှောဖွဈသလို အသားခွောကျတဲ့လူကလညျး အယျလျကိုဟောပါဝငျပွီး ခွောကျသှတေဲ့အမြိုးအစားကိုရှေးခယျြရငျတော့ မိတျကပျကခွောကျသှအေ့ကျကှဲနမှောပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ မှနျကနျတဲ့ဖောငျဒေးရှငျးအရောငျရှေးဖို့ အရေးကွီးသလို အမြိုးအစားကလညျး မှနျကနျနဖေို့က မဖွဈမနလေိုအပျတယျနျော။
(၄) မကျြနှာကို တဈပတျတဈခါလောကျ ဆဲလျအသတှေဖေယျရှားပေးပါ။
မကျြနှာမှာ ဆဲလျအသတှေမြေားနရေငျ မိတျကပျလိမျးရတာ အဆငျမပွသေလို အသားအရမေညီညာတဲ့နရောတှမြေားနတောမို့ မိတျကပျညီအောငျညှိဖို့အတှကျ အရမျးကိုခကျခဲပါတယျနျော။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ယောငျးယောငျးလေးတှေ တဈပတျမှာတဈခါ ဆဲလျအသတှေကေိုဖယျရှားဖို့အတှကျ Exfoliate လုပျဖို့လုံးဝမမပေ့ါဘူးလို့ ကတိပေး။
Related Article >>> အသားဖွူဖို့ကနံပါတျ (၁) လား? နိုးးးး အသားအရကေောငျးဖို့က နံပါတျ (၁) ပါနျော…
(၅) ခြှေးထှကျတတျတဲ့ အသားအရပေိုငျရှငျဆိုရငျ ရစေိုခံ၊ ခြှေးစိုခံတဲ့ မိတျကပျကိုသုံးပါ။
တခြို့တှရှေိတယျ ငုတျတုပျထိုငျနရေငျးကို အဆီမပွနျဘဲ ခြှေးတှပွေနျနတော။ အဲဒါမြိုးကတြော့ တျောရုံ Matte အမြိုးအစားနဲ့ သိပျအဆငျမပွတေော့ဘူးလေ။ အဲဒီအခါကရြငျတော့ ရစေိုခံ၊ ခြှေးစိုခံတဲ့ ပစ်စညျးမြိုးသုံးမှ အဆငျပွမှောမို့ ရဲရဲသာသုံးပါလို့။ (မိတျကပျတော့ သခြောပွနျဖကျြပေးနျော။ မဟုတျရငျ ခြှေးပေါကျပိတျပွီး အဖုအထဈတှေ ထလာလိမျ့မယျ။)
ကဲ ဘာခကျလို့တုနျး? ဒီအထဲမှာရော ခကျတဲ့အခကျြတှပေါလားပွော? ဒါမဲ့လေ ယောငျးလေးတို့က အာ့လိုလှယျလှယျလေးတှကေိုပဲ လိုကျမလုပျခငျြတာက ပွဿနာ။ တဈနကေုနျလှခငျြတယျဟုတျ? ဒါဆိုရငျ ဒီလိုအခကျြလေးတှကေိုလိုကျနာပွီး ကိုယျ့အသားအရကေိုလညျး ကောငျးကောငျးဂရုစိုကျရမယျနျော။ အာ့ဆိုရငျ နောကျတဈပုဒျမှ ထပျတှကွေ့မယျလို့ ခုတော့တာ့တာ။
Tagged all, day, flawless, foundation, In, longwear, look, makeup, place, tips
ယောက္ခမလောင်း တီတီတို့ ပိုလှစေမယ့်နည်းလမ်းကောင်းများ
Posted on April 9, 2017 Author Jasmine
ယောက္ခလောင်းတို့ရေ မိတ်ကပ်ဘယ်ကစပြင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေလား ဒါဆို ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်
ကျန်းမာစိုပြေတဲ့ Glowing Skin Makeup Look လေး ရဖို့  ဒီ အဆင့် (၅)ဆင့် ပဲ လိုပါတယ်။
Posted on January 15, 2018 January 15, 2018 Author Megan
မိတ်ကပ်လိမ်းမယ်ဆို ကြည်ကြည်ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေမှ ဆိုတဲ့ ယောင်းတို့အတွက်
Posted on December 12, 2017 Author Hana
အသားအရေအလှအပအတွက် ကြက်ဥကို ဒီလိုနည်းပေါင်းစုံအောင် သုံးလို့ရတယ်တဲ့နော်…
ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အရသာတွေထုံမွှမ်းနေတဲ့ ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်လုပ်နည်း
ဖရီး ဝိုင်ဖိုင်တွေကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း ဘယ်လို သုံးကြမလဲ??